सरर यात्रा गर्ने दुहुँबासीको धोको ! | दर्पण दैनिक
सरर यात्रा गर्ने दुहुँबासीको धोको !
प्रकाशित मिति: २०७६ भाद्र १९ गते ०४:२९
प्रेमराज जोशी / राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको दार्चुला–तिंकर सडकखण्ड निर्माणको करीव १० बर्ष बितिसकेको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगावाट तिंकर सम्मको जम्मा १३३ किलोमिटिर सडको दुरी रहेको छ । १५ बर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको दार्चुला तिंकर सडक आयोजनालाई अब ५ बर्ष मात्रै बाकी छ । २०६६ साल देखी हाल सम्मको कार्य प्रगति तर्फ अहिले म जान, चाहन्न, तर दार्चुला तिंकर सडकले के के गर्यो ? कति पक्की पुल निर्माण गर्यो ? कति किलो मिटर गाडि गुडाउन सफल भयो र कति किलो मिटर ट्रयाक खोल्न सक्यो त्यो विषयलाई कुनै दिन कोट्याउँदै छु ।
वास्तवमा आज मलाई मात्र होईन रहेछ यो बिषयले चिन्तित बनाएको हजारै दुहुँ बासी जनतालाई चिन्तित बनाएको रहेछ जवकी म हजुरवुवा बिरामीको खवरले गाउँजाने अवसर पाए राजधानी काठमाडौं बाट दार्चुला सदरमुकाम खलंगा ३६ घण्टाको यात्रा पछि मात्रै पुगे । हजुरवुवालाई के के न पो भैहाल्छ की भनेर सदरमुकाम खलंगावाट हतार हतारमा सामान बनाएर घर तर्फ हिडे । लास्कु खोलामा जिप भेटे जिप भित्र बसे श्रिवगर सम्म ५० रुपैयाँ भाडा तिरे, जम्मा सडकको दुरी ४/५ किलोमिटर मात्र होला ।
ड्राईभरले ५० रुपैयाँ प्रतिब्याक्तिको भाडा उठाँउन थाल्यो मैले पनि ५० रुपैयाँ दिए । कसैसँग बोलेन मेरो शरीर पो श्रिवगर थियो मन भने घरमा वाजेलाई के के न हुन्छ भन्ने चिन्तामा थियो । श्रीवगर बाट हतार हतारमा राताकाठा माथि बाट फेरी ढुङगा खस्छ की भन्ने चिन्ताले दौडिए र १ घण्टाको पैदल यात्रा पछि म तिमुरपाटा पुगे त्यहाँनीर पनि जिप भेटे र जिपमा बसे पासुको धारमा पुग्ने बेला यात्रा समाप्त भन्योे, ड्राईभरले गाडिबाट वाहिर झरे २ सय रुपैयाँ भाडा भन्यो चुपलागे १ हजारको नोट झिके ८ सय फिर्ता दियो जवकि तिमुपाटा देखी त्यहाँ सम्मको सडको दुरी भने ६र७ किलोमिटर मात्रै होला ।
त्यहाँ बाट मेरो घर पुग्न १/२ घण्टा पुन पैदल लाग्थ्यो केहि कुरा सोच्दै हिडिरहेको थिए । यात्रुहरुकोे सदरमुकाम खलंगाबाट घर जाने भिड लागेको थियो । मलाई केहि वुवा, वाजे, दाईकोनाउँवाट र केहि आफ्नौ पेशाले पनि चिन्ने थुप्रै थिए । २/४ जनाले पत्रकार जि पत्रकार जि भनेर वोलाउन थाले । कहाँवाट आउनु भो धेरै दिन पछि भेट भयो लै न यो यस्तो विडम्बना छ, सडकको कुरा सँगै अलि अलि राजनीतिका कुरापनि गर्ने थाले हाम्रो गाउँतिरका यि विभिन्न विषय उठाई दिनु पर्यो भनेर भन्न थाले मैले आफ्नो मिडिया मार्फत पक्कैपनि तपाईहरुको अवाज एक न एक दिन बोलेरै छोड्ने छु, भन्ने वाचा गरे र झिना मसिना कुरा गर्दै घर पुगे । यहाँ यो बिषय उठाएर दुई चार शब्द लेखेर जिप धनी ब्यवसायीहरुमा परेको असर प्रति क्षमा माग्न चाहन्छु । राजधानी काठमाडौँमा पत्रकारीता गरेर हिँडिरहदा र सँगै पत्रकारीता पढ्दै गर्दा आफ्नो गृह जिल्ला दार्चुला त वर्षको १÷२ चोटी मात्र पुगिन्छ ।
तर म १/२ चोटी आवत–जावत गर्ने मान्छेलाई तै पनि अलि अलि जागिरे मान्छे लाई त केहि फरक परेन होला तर विहानको खाना खाएर वेलुकी खाना खोज्न गाउँ गाउँ साहुँकोमा डुल्न पुग्ने विचराको लागी यो कत्ति सम्मको अप्ठ्यारो विषय बनिरहेको होला कहिले कसैले सोचेको छ, गाउँ गाउँको सिहदरवार भए नी उस्तै । भाडाको विषयलाई मात्र होईन सडककै विषयलाई सयौं चोटी सम्वन्धित ब्याक्ति र सम्वन्धित निकाय सँग कुराकानी गर्दा विविध कुराहरुमात्र आउँछन् । केहि महिना अगाडि यो सडकको बारेमा स्थानिय सरकारले के—के गर्न पाउँछ ? लौ न गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भैसकेपछि त केहि गरौन भनेर गाउँपालीका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीलाई वुझ्दा यो सडक खण्ड स्थानिय सरकारको मातहतमा नभई केन्द्रिय सरकारको मातहतमा रहेको र स्थानिय सरकारले कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने भन्ने जवाफ दिनु भो पकै पनि जनप्रतिनिधि भए पनि कानुन भित्रको नै पो हो काम गर्ने चित्त वुझाए ।
२ बर्ष पहिला म जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रेडियो पत्रकारीता गर्दै गर्दा यो सडक खण्डमा सामान ढुवानी गर्ने ट्याक्टर, र जिपहरुले गरेको मनमानीलाई कारवाहीमा ल्याउने प्रयास गरे र सफल पनि भए । त्यति वेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी केदार खनाल सर हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई नै सिधै फोन गरेर सर समस्या यो हो भनेर सिधै दर्साए । र डिएसपी सर लगायतको जिल्ला ट्राफिक, प्रशासनले वालुवाको ट्याक्टर र एक जिप लाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गरेको कुरा प्रस्ष्टाउँछु ।
फेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो विषयमा मिटिङ वस्यो । जाने फुर्सद भएन २०७३ को चैत्र महिनामा । एउटा त्यो सडक खण्डको मात्र होईन रैछ त्यो दिनको मिटिङ दल्लेख सडक खण्डको वारेमा पनि छलफल भयो । जिप धनी, यात्रु र प्रशासन विच प्रतिकिलोमिटर कच्चि सडक खण्डमा प्रति ब्याक्ति ७ रुपैयाँका दरले भाडा उँठाउने र लिने दिने सहमति भयो कार्वान्यवनको पाटो कहाँ सम्म पुग्यो २०७३ सालको कुरा हो । मिटिङ हुनु पुर्व लास्कु खोला देखी गरमोरा सम्मको २ सय रुपैयाँ प्रतिब्याक्ति भाडा, झोला छ भने १००/५० रुपैयाँ झोलाका लिन्थे ।
मैले चालेको कदमले धेरै त केहि पनि गर्न सकेन मात्र गाडिमा ५० रुपैयाँ र झोला निशुल्क घर पु¥याउनमा सहज गराइदिए । मिटिङ अनुसार गाडि भाडा लास्कु खोला देखी गरमोरा सम्म १२ किलोमिटर सम्म होला सडकको दुरी १२ ले ७ लाई भाग गर्दा ८४ रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो । १ सय रुपैयाँ नि ठिकै हो तर कार्यान्यवनमा भने पटक्कै भएन कागजमा एक कुरा लागु एक कुरा हुने यो नेपाल भरीकै समस्या हो त्यो दार्चुलामा पनि लागु कहाँवाट हुन्थ्यो ?
सडकको स्थिति हेर्दा जिप धनीहरुलाई पनि ६÷७ किलोमिटरको वाटोमा पनि २ सय रुपैयाँ प्रति ब्याक्ति लिएर पनि नपुग्ने अवस्था पक्कै पनि छ । यसमा को जिम्मेवार त प्रहरी प्रशासन, दार्चुला तिंकर सडक, स्थानिय सरकार, यात्रु कि जिप धनी ? गत वर्ष कै फागुन महिनमा ११ जनाको ज्यान जाने गरी राताकाठामा जिप दुर्घटना भएको थियो । अझैपनि दुर्घटनामा आफन्त गुमाएकाहरुको आँखाको आँसु रोकिएको छैन् । दार्चुला तिंकर सडकको गैर जिम्मेवारीपन त ठाउँठाउँमा हामी सवैले देखेकै विषय हो । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाहीको फाईल विभागमा पुग्छ कार्वाही हुनुको साटो ठेकेदारको म्याद थप भएर पुन जान्छ र तै ठेकेदारले पुन काम गर्छ ।
१०÷११ वर्ष भैसकेको दार्चुुला तिंकर सडकलाई सवैले राम्रो सँग चिनेका छौं । कहि जग्गाको नक्सामा ट्रायाक खोलीएको छ गत हिउँदको समयमा दुहुँ गाउँपालिका वडा नं. २ साविकको हिकिला ७ मन्तढमा देखिएको समस्या हो । निर्माणा धिन १०÷११ वर्ष भैसकेको सडक खण्डमा त्यहा अमिनको गल्ती, ठेकेदारकरो कि सडक विभागको खोजी भएर कार्वाही पक्कै पनि हुनुपर्छ । जग्गाधनीहरुले उचित न्याय पाउनुपर्छ ।
जग्गाधनीहरुको बारम्वारको सडक वन्दले ब्यवसायप्रति पक्कै पनि असर प¥यो होला । पीडित जग्गाधनीहरुको भनाई आफ्नो ट्र¥याकमा सडकले हिन्नुपर्छ । हाम्रो जग्गा छोडिदिनु पर्छ भन्ने थियो । कयौं पटक गाडि वन्द समेत गरे । एक दिन सडक प्रमुख लगायत जिल्लाका प्रमुख निकायका ब्याक्तिहरु आए, छलफल भयो । निष्कर्षमा पुगने असार अन्तिम सम्म हामी हाम्रै ट्र¥याकमा जान्छौ भन्नु भयो असार सकिएर भाद्र पनि सकिन लाग्यो कहिले जान्छ आफ्नै ट्र¥याकमा सडक ।
सडक खण्डले विचार गर्नु पर्ने कुरा विग्रेको वाटो ३/४ सय मिटर अव कटिङ गर्दा तल्लो वस्तिलाई असर पर्नु भएन । राज्यको ढुकुटी एउटै ठाउँमा वारम्वार लगानी हुनु भएन । छलफल हुँदै गर्दा सडक प्रमुखले भन्नु भएको थियो । अव नयाँ वाटो खन्न ५ करोड राज्यको लगानी हुन्छ भन्नु भएको थियो । निर्माण भैसकेको सडक खण्डमा ५ करोड पुन लगानी हुँदा राज्यको ढुकुटीमा पर्ने गएको असरले पक्कै पनि सचेत नागरीकको हिसावले तिनवटा पक्ष दार्चुला तिंकर सडक, नापी र ठेकेदारलाई पक्कै पनि कारवाही हुनुपर्छ । कार्वाहि नहुन्जेलसम्म यो कलम वन्द हुने छैन् विचार आफै गर्नु होला ।
२०६४ सालको संविधान सभाको चुनावका वेला जति पनि राजनितिक दलहरु मैदानमा आए तिनीहरुको भोट माग्ने एजेण्डाका रुपमा दार्चुला तिंकर सडक आउन थाल्यो, तर हालसम्म प्रगति शुन्य छ । मुलुकको समग्र विकास यातायातले मात्र सम्भव हुने भएकाले ४/५ वर्ष भित्र दार्चुलाको तिंकरसँग नाका खोली त्रिदेशिय ब्यापारमा मित्रता वढाई दार्चुलाको बिकासले फड्को मार्ने सर्वविदितै छ ।
अन्त्यमाः स्थानिय सरकार, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला ट्राफिकलाई एक अनुरोध पकै पनि गर्छु । नेपालीहरुको महाँन चाँड दशै नजिकिदै गर्दा देशका विभिन्न स्थानमा पढ्न, केहि ब्यवसाय गर्न, वैदेशिक रोजगारीको लागि भारत लगायतका अन्य छिमेकि मुलुकमा गएका र चाँड मनाउन आउने दाजुभाई दिदि वहिनीहरुलाई आफ्नो घर सम्मको यात्रा सजिलै र सहज रुपमा गर्न पाउन कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस अनुरोध गर्न चाहन्छ । यात्रु र ब्यवसायीलाई फरक नपर्ने गरेर भाडादर कामय होस ।
‘यो बास कुनै हो मेरो नीत्य जीवन मार्गको,म कतैतिर हिड्ने छु स्वप्न पुरा भएपछि ।’